इतिहासका सबैभन्दा डरलाग्दो पाँच रहस्य, जसको समाधान आजसम्म कसैले गर्न सकेको छैन - NewsPolar NewsPolar
इतिहासका सबैभन्दा डरलाग्दो पाँच रहस्य, जसको समाधान आजसम्म कसैले गर्न सकेको छैन
१ असार २०७९, बुधबार १४:५३
यरूशलेमको ‘आर्क अफ कोभेनन्ट’
५८७ ईसा पूर्वमा, बेबिलोनी सेनाले जेरुसेलममा आक्रमण गर्यो । यस आक्रमणमा यहूदी सहर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो । यससँगै उनको पहिलो मन्दिर पनि ध्वस्त भयो । त्यो समयमा मन्दिरमा राखिएको ‘आर्क अफ कोभेनन्ट’ लाई के भयो ? यो अझै रहस्य नै छ। ‘आर्क अफ कोभेनन्ट’मा १० धर्मको आदेशका पुस्तकहरू थिए ।
आर्क अफ कोभेनन्ट सन्दूक कसले लगे, कहाँ गयो ? भन्ने अझै पनि ठूलो प्रश्न रहेको छ । यसको कुनै प्रमाण छैन । कसैको विश्वास छ कि सन्दूकलाई बेबिलोनी सेनाले यरूशलेम कब्जा गरेपछि लगेको थियो, जबकि कोही विश्वास गर्छन् कि यो आक्रमण हुनु अघि कतै लुकाइएको थियो । सन्दूक बेबिलोनी सेना द्वारा नष्ट भएको पनि कतै विश्वास गरिन्छ ।
ओक आइसल्याण्डमा खजाना को रहस्य
क्यानडाको नोभा स्कोटिया नजिकै रहेको ओक आइसल्याण्डमा ठूलो खजाना रहेको बताइन्छ । दुई शताब्दीभन्दा बढी समयदेखि, यो कुरा कथाहरू मार्फत संसारभर प्रचार गरिएको छ । यो ठाउँमा क्याप्टेन विलियम किड नामक समुद्री डाकूले आफ्नो खजाना लुकाएको बताइएको छ । यसपछि ओक आइसल्याण्डमा लुकेको खजाना खोज्न करोडौं डलर खर्चिए पनि आजसम्म त्यहाँ लुकेको खजाना फेला पर्न सकेको छैन ।
बेबिलोनमा झुण्डिएको बगैंचा (ह्यांगिंग गार्डेन) को सत्य
२००० वर्ष पहिले बेबिलोनमा साँच्चै झुण्डिएको बगैंचा थियो वा थिएन भन्ने अझै रहस्य छ । धेरै इतिहासकारहरूले २५० ईसा पूर्वमा आफ्नो पुस्तकहरूमा बेबिलोनमा ह्याङ्गिङ गार्डनहरू रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले यस ह्याङ्गिङ गार्डनलाई विश्वको आश्चर्य भनेका छन् । यद्यपि, ह्याङ्गिङ गार्डनको बारेमा कुनै पुरातात्विक प्रमाण फेला परेको छैन । बेबिलोन र वर्तमान इराकमा उत्खननले झुण्डिएको बगैंचाको कुनै प्रमाण फेला पारेको छैन । अहिलेसम्म यो रहस्य कायमै छ ।
अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपतिको हत्याको रहस्य
अमेरिकाका ३५ औं राष्ट्रपति जोन एफ केनेडीको हत्या कसले गर्यो, उनलाई कसले मार्यो ? भन्ने अहिलेसम्म पनि ठूलो प्रश्न रहेको छ । अमेरिकी इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो रहस्य मानिन्छ । थुप्रै दशक बितिसक्दा पनि जोन एफ केनेडीको हत्यालाई लिएर एक मत छैन । सन् १९६३ नोभेम्बर २२ मा अमेरिकाको डलास शहरमा अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति केनेडीलाई हार्भे ओसवाल्डले गोली हानेका थिए । केनेडीको हत्याको दुई दिनपछि रुबी नामका एक व्यक्तिले ओसवाल्डको हत्या गरे । त्यसपछि १९६७ जनवरी ३ मा रुबीको फोक्सोको क्यान्सरबाट मृत्यु भयो । अमेरिकाको ३५औँ राष्ट्रपतिको हत्या त्यति सजिलो थिएन, उनको षड्यन्त्रमा हत्या गरिएको इतिहासकारहरुको विश्वास छ । केनेडीको हत्या कसले गर्यो भन्ने कुरा आजसम्म पनि रहस्यमै छ ।
#आर्क अफ कोभेनन्ट
#जोन एफ केनेडी